Rochak News Archives - Rochak Khabar
अहिले मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि समेत प्रयोग गर्छन्।लिंगको आकार ठूलो हुँदैमा यौन सन्तुष्टि मिल्ने कुरा गलत भएको मेडिकल साइन्सले पुष्टि गरिसकेको छ। यौनविद् रुसेल आइसम्यान्सले १८ देखि २५ वर्षका महिलाहरूमा लिंगको लम्बाइ र चौड...
जान्नु आवश्यक छ कि सेक्स जहिले पनि सेफ रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि । असुरक्षति यौनका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा कण्डमको प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ । सेफ सेक्सका लागि कण्डम भरपर्दो अस्थायी साधान समेत मानिन्छ । यसले विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउन समेत मदत गर्छ । तर, धेरे महिलाहरुलाई कण्डमको प्रयोग गर्न मनपर्दैन । यसका केही कारणहरु रहेका छन् । चरम सुख मिल्दैन केही युवतीहरुका अनुसार कण्डम लगाएर सेक्स गर्दा चरम आनन्द मिल्दैन ।...
श्रीमतीसँग मस्त सुतिरहेका श्रीमान् राती साढे २ बजे पलङमुनिबाट आवाज आएपछि ब्यूँझिए । उनले पलङमुनि के रहेछ भनेर हेर्दा त्यहाँ उनकी श्रीमतीका प्रेमी लुकिरहेको भेट्टाए । बेडरुममा श्रीमतीका प्रेमी भेट्टाएपछि उनी रिसले आगो भए । उनले प्रेमीलाई त्यहीँ मरणासन्न हुनेगरी कुटे । हल्लाखल्ला भएपछि गाउँलेहरु जम्मा भए । ती व्यक्तिले श्रीमती र उनका प्रेमीलाई एउटा कोठामा थुनिदिए भारतको बिहार कटिहार जिल्लामा यस्तो विचित्रको घटना भएको हो । मंसुर नाम गरे...
सेक्सलाई सबैभन्दा राम्रो व्यायाम पनि मानिन्छ । तर प्रायः पुरुष सेक्स सम्बन्ध राखिसकेपछि थकान महसुस गर्ने गर्छ । केही पुरुषहरु भने सेक्सपछि सुत्न मन पराउँछ । वर्तमान समयमा तनाव र व्यस्त दिनचर्याले गर्दा पनि थकान महसुस हुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । जानी राखौं, पुरुषहरु सेक्स सम्बन्धपछि किन थकान महसुस गर्छन स् हार्मोनका कारण सेक्स सम्बन्धपछि थाक्नु र सुत्न मन पराउनुका वैज्ञानिक कारणहरु पनि छन् । यौन सम्बन्धपछि पुरुषमा हुने आक्सिटोसिन...
सेक्स गर्न मन लाग्छ । महिलालाई देख्नेबित्तिकै उत्तेजना आएको महसुस हुन्छ । या अश्लील चलचित्र हेर्न मन पर्छ । यदि यसो हो भने सेक्स लत लागेको हुन सक्छ । धूमपान, मदिरापान, चिया जस्ताको लतजस्तै यो पनि एक किसिमको लत हो । सेक्स एक प्राकृतिक क्रिया हो । तर, सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने हरेक बानी सामान्यभन्दा बढी हुन्छ भने त्यसले व्यक्तिमा नकारात्मक असर छाड्छ । जब यौन क्रिया नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ भने त्यसलाई सेक्स लत भनिन्छ । यसबाट उसको व्यवहा...
मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हुने देखाएको छ । नियमित सेक्स गर्दा के के फाइदा हुन्छः टाउको दुख्नेः नेशनल सर्वे अफ सेक्सुअल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले माइग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित सेक्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा कम सेक्स गर्नेहरुलाई माइग्रेन हुने नयाँ तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । ब्लड प्र...
सबैभन्दा पहिले हस्तमैथुनबारे जानौँ । हातले अथवा केही साधन प्रयोग गरेर, यौनाङ्ग चलाएर, हल्लाएर वा खेलाएर यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने विधि हो हस्तमैथुन । यसलाई यौन आनन्द प्राप्त गर्ने एउटा अति नै सुरक्षित यौनक्रियाकलाप पनि भन्न सकिन्छ । पुरुषले आफ्नो लिङ्गलाई हातले बिस्तारै घर्षण गरेर र वीर्य स्खलन गर्छन् भने महिलाले पनि योनीको भगाङ्कुर खेलाएर आनन्द लिन्छन् । कसै कसैले विभिन्न किसिमका साधन वा कृतिम यौनाङ्गहरू प्रयोग गरेर पनि हस्तमै...
छोरी मान्छेले दिनहुँ हस्तमैथुन गर्दा के–कस्तो असर पर्छ ? – डा. राजेन्द्र भद्राको जवाफ
हाम्रो समाजका धेरैजसो मानिसले महिलाहरू हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार ८२ प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गरेको अनुभव भएको बताएका छन् । महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ? योनिलाई नै महिलाको प्रमुख यौनअङ्ग मानिन्छ । महिलाहरूमा योनिबाहेक अन्य विभिन्न अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन् । जस्तै कि भगक्षेत्र, ठूलो तथा सानो भगोष्ठ, भगांकुर, स्तन । त्यसबा...
काठमाडौं । साधारणतयाः योनिच्छेद नफाटेका केटीहरुलाई कुमारी भन्दछन् । योनिच्छेद नरम र पातलो जालो जस्तो हुन्छ, जुन स्त्रीको यौनीको मुखमा टासिएर रहेको हुन्छ । यसले यौनीको मुखलाई पूर्णतया बन्द गरेको भने हुदैन । समान्यतया जव केटीहरुको पहिलो यौन सम्पर्क हुन्छ, त्यसबेला योनिच्छेद तन्किन्छ र च्यातिन्छ । जसले गर्दा केही असजिलो हुने र रगत आउने हुन्छ । योनीद्धारको आकार र बनावट महिलाहरुमा फरक फरक हुने भएकोले योनिच्छद फाट्दा हुने असजिलो तथा रगत बग...
यस्तो अवस्थामा भेटिए फेवातालको किनारमा भारतीय जोडी -भिडियो सहित
प्राकृतिक सुन्दरताले भरीपुर्ण पोखराको मुख्य पर्यटकिय क्षेत्र लेकसाइडमा दिनानुदिन पर्यटकहरु पुग्ने गर्दछन् । स्वदेशी पर्यटक सगैँ छिमेकी मुलुक भारत, चिन, कोरीया, अमेरीका, स्पेन, नेदरल्याण्ड जस्ता विभिन्न थुप्रै देशरु बाट पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् । कोहि मनोरन्जका लागी, कोहि अध्ययन गर्नका लागी, कोहि व्यवासाय गर्नका लागी त कोहि विभिन्न चलचित्र तथा गीतका भिडियो छायांकनका लागि पनि पुग्ने गर्दछन् । त्यस्तै म्युजिक भिडियोको छायांकनका लाग...